Tolona, ady, rà mandriaka
2008-09-26 @ 10:13 in Andavanandro
Iza no tsy mihoron-koditra rehefa mandre ireny famonoan'olona re isan'andro vaky ireny. Na dia mitatitra isan'andro ireny aza ny gazety eto an-toerana mbola tsy ampahafirin'izay mitranga andavanandro izany. Tsy vaovao rahateo raha tsy zavatra tantaraina. Omaly ny omaly isika mpanara-baovao no nandre fa tao anatin'ny alina iray monja (zoma 19 septambra 2008) dia olona efa 12 no novonoin'ny mpanendaka tamin'iny faritra manodidina an'Andravoahangy iny. Mampihorohoro tanteraka ny mandre azy izany. Eto Antananarivo anefa ireny ka heno ihany fa ny any ambanivohitra rehetra any dia ady sy tolona isan'andro no iainana.
Inona no tena mahaloza azy? efa mivondrona ny fokonolona amin'ireny toerana somary mihataka ny tanandehibe ireny fa miara-dia ihany koa ny jiolahy sy ny dahalo ary ny mpamono olona. Nanafika tanàna antsoina hoe Ambohidravaka tamin'iny faritry Vakinankaratra iny ny andian-jiolahy volana vitsivitsy lasa izay. Izany no toy ny tantara tamin'ny andro fahiny nisy ireny tanàna nifanafika ireny satria tsy nisy nifampitsitsy ny roa tonta, na ny fokonolona na ny andian-jiolahy dia tena nifanandrina tahaka ireny western very sheriff miampy kungfu shaolin ninja ireny; izany hoe mifangaro ao avokoa ny lahatsary gidragidra fantatra rehetra ankoatra an'i Terminator sy Rambô. Hipoka tanteraka ny Hopitaliben'Antsirabe renivohitra nanditra izany alina izany nitaterana ny maratra sy ny tapaka ary ny very rà be dia be avy amin'ny fokonolona fa ny jiolahy ihany koa nitondra ny maratra tao aminy fa tsy hitondra azy any amin'ny hopitaly aloha (manana ny hopitaliny ve izany ry zalahy?). Ny any amin'ny firenena miady an-trano sisa no tsy fantatra raha tahaka izay niseho tamin'ity alina ity. Zairina manta tsotra izao ny ratra rehetra, dradradradra izao, tomany izao... efa tsy nifandrenensana intsony. Raha nisy ny sarin'izany dia ho gaga ianao ary hieritreritra hoe any Iràka ary ve izaho izany sa any Palestina? Soa ihany fa tany amin'ny toerana mbola mafy ny firaisankinan'ny fokonolona aza izany! Fa nahoana izany no nitranga teto Madagasikara? Tsy matoky ny mpitandro ny filaminana intsony ny mponina!
Vao maika koa hampihemotra ny fitokisan'ny mponina ny mpitandro ny filaminana ny fahatrarana ny sasany amin'izy ireny nandroba, nanendaka, nangalatra ary saiky hanao an-keriny ihany koa aza, vaovao tao anatin'ny herinandro izany raha ela indrindra. Efa mihamivantana amin'izay, ho'aho, ny fitangosan'ny mpitandro ny filaminana sasany vola tamin'ny alalan'ny kolikoly teo aloha. Sa mbola tohizan-dry zalahy aty an-drenivohitra ny fananon-dry zalahy tany ambanivohitra tany? Mihamasiaka ny jiolahy ka mamono olona ihany koa satria fantany fa raha tratran'ny fokonolona izy dia efa ny ainy izay no manefa. Inona no tena fototry ny olana? Iray amin'ireny angamba ny fanafahan'ny mpitsara, na mpanao famotorana ny olona efa fanta-daza amin'ny fanaovan-dratsy, ka mampisy Tsimatimanota eo amin'ny lalàna. Ho aiza na hanao inona ary ny fokonolona manoloana ny tsy rariny mihatra aminy? Hisafidy ny hanao inona ny fokonolona raha mbola mitaky ny fanajana ny fiarovana ny zon'ny mpanao ratsy efa mivandravandra fa tsy misalasala ny mandatsaka ain'olona nefa tsy nijery ny nanjò ny olo-tsotra ihany ny mpiaro ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny? Efa voarara rahateo moa ny didy famonoana ho faty! Efa mirediredy mihitsy koa izaho izany!